Maitiro ekuenda nehutachiona paTikTok uye usatadze mukuyedza. - Hanukeii
Maitiro ekuenda nehutachiona paTikTok uye usatadze mukuyedza.
Kushandiswa kwedhijitari kwanhasi kunotizadza nekushamisika, pamwe nekusaziva dzimwe nguva. Tese isu tinopa chikamu chenguva yedu kukudyiwa kukuru kwenzvimbo dzekudyidzana, kusanganisira imwe yazvino ongororo yeDeloitte, inoona kuti munhu mumwe muvatatu anotarisa pane yavo nharembozha kamwe chete pamaminitsi manomwe, ndokuti kanenge ka1 pazuva. Iko kufunga-kurira.
Uye izvo zvikonzero zvakakwana zvezuva rega rega kunyorera nyowani uye zvimwe zvigadzirwa zvemadhijitari zvinoonekwa mumutambo, kutsiva kana kuzadzisa zviripo. Chinhu chinonakidza pamusoro penyaya iyi yese ndechekuti neimwe nzira, kunyangwe isu tichiramba zvakaomarara sei, isu tese tinoda kuvepo, kuve nehutachiona, kuonekwa nekuzivikanwa.
Zvino, isu tinoda kuzvibvunza isu nezve chii chiri nezve masocial network ari akapindwa muropa? Ini ndinoshuva dai tine mhinduro chaiyo, zvisinei, inoenda kupfuura dhizaini yazvino uye kutakurika. Muchokwadi, isu tingashinga kufunga kuti zvine chekuita nemutauro wepasirese wavanobata uye nekumhanyisa kunoita izvo zvemukati.
Kana tichitaura nezvemutauro wepasirese tinoreva kuti zviri nyore uye zvakajeka. Izvo zvakagadzirwa kuitira kuti mhando dzese dzevanhu dzinzwisise, uye kana tichiti munhu wese NDIVANHU VOSE. Zvisinei nemutauro wako, nyika, zera kana basa. Uye kana iri yekumhanya, yakabatana zvakananga neavhareji yekutarisisa chiyero chemunhu paInternet, ndiko kuti, unotora nguva yakareba zvakadii kune izvo zvaunoona iwe paunotarisa pawebhu. Kazhinji zvinomira pakati pe5 kusvika 10 min ... asi izvo pamusoro pemakore uye nehuwandu hweruzivo rwekuona rwakatikomberedza, takadzikisa kusvika kumasekondi masere, paInternet. Crazy!
Imwe yemasocial network yaiziva kusanganisa makiyi ese ekubudirira online zvakanyanya yaive TikTok. Uye ndezvekuti pakutanga zvainzwika seimwezve chikuva chezva audiovisual zvemukati zvinoshandiswa na inopisa... asi ikozvino, ndiye iye anoraira kumira mudomasi yehukuru hwakawanda hwedigital mapuratifomu aripo munyika.
Musiki weTikTok: Zhang Yiming, aive nezvinhu zvese zvakajeka kubvira 2016. Ndiani panguva iyoyo aiona hunhu hwevanhu paYouTube uye nyaya Instagram. Saka ndeipi yaive mhinduro ine musoro? Mavhidhiyo asingasviki mineti, nziyo dzinodzokororwa uye dzinotapurirana mutinhimira, kufamba kwakakurumidza. Uye kusvikira nhasi, zvave zvichibudirira.
Ichokwadi ndechekuti mazuva ano haichangoshandiswa ne inopisa kana vakakurumbira, muchokwadi, zvigadzirwa zvekupfeka, mabhaisikopo, vaimbi vachangobuda, kunyangwe zvikonzero zvemagariro vanoona TikTok semubatsiri wavo wekuzvizivisa.
Uye iwe, kana iwe uchiziva kuti iwe une chimwe chinhu chekudzidzisa vamwe uye kuti vanhu vanogona kudzidza kubva kwauri, kana kutoda kuburitsa imwe mari kuburikidza netiweki, TikTok inogona kunge iri mhinduro, iyo munguva yepakati uye yakareba iwe unogona kunakirwa neMabhenefiti ako. Icho chiri chikonzero ichi kuti mu Hanukeii Isu takagadzirira ichi chinyorwa nemamwe manomano ekuti iwe uputse iyo inotyisa 'algorithm' ... uchingoseka, asi kuitira kuti iwe uwedzere kana kushoma uinzwisise uye udzidze kurarama nayo. Mukuwedzera, ivo vachave mazano kuti iwe uonekwe mu chikafu yemamirioni evashandisi ane ino chikuva. Ready? Ngatiendei nazvo.
Chero ani anogona kuvhura account pa TikTok.
Ehe ... kana iwe uine smartphone, kuvhura account paTikTok ndiwo marongero ezuva. Nekudaro, hazvisi nyore sekutumira uye nekumirira vateveri kuti vanaye kubva kudenga. Pane zviito zvinoita kuti zvemukati zvaunogovana zviende nehutachiona.
Ita icho chikamu chemuitiro wako.
Chinhu chinoranga iyo TikTok algorithm kushaikwa kwekusagadzikana kwemushandisi, pamwe neanoona kana semutambi, kana ukasafamba mumvura iyo algorithm inongokunyudza. Zvinokurudzirwa kuti ugoisa zvemukati zuva nezuva uye zvakare uve neakafanana nhoroondo mutsara, saka iyo algorithm ichaita mashiripiti uye ikubatsire iwe kumira nekukurumidza sezvazvinogona.
Pakupedzisira zvese ndezve maitiro.
Iri izwi nderei rave kusiri kufamba zvakanyanya kupfuura maitiro acho. Sezvakangoita paTwitter kana Instagram, zuva rega rega kana vhiki, pachave nezwi rakakosha rinenge richitsanangura maitiro evashandisi kweanenge avhareji yemaawa makumi manomwe nemaviri.
Iyi TikTok inonyatsoziva, uye nyaya dzayo dzekubudirira dzave nziyo dzakabatanidzwa kune yakatarwa dhanzi nekudzokorora kufamba, kana audios emumhanzi anoshandiswa kune chaicho hupenyu. Mukupedzisira, zvirimo zvinogadzirwa nevashandisi zvinova zvinosetsa kana zvakagadzirwa zvakanaka, izvo zvinoita kuti vanhu vazhinji vade kuzviteedzera uye iyo dhomino mhedzisiro isingarambike.
Kana iwe uri paTikTok, iyo "Yewe" chikamu chinokuratidza runyorwa rwemaitiro, iwe unoshandisa iyo yakafanana fomati inoshandiswa nevamwe, semuenzaniso: iwoyo mimhanzi, mafambiro uye mazwi uye pamwe mangwana uchaonekwa mune chikafu ye "Yewe."
Kutanga, iwe unofanirwa kuteedzera zvinoitwa nevamwe zvishoma, asi kana watoita vamwe vateereri, shandisa maitiro, asi mucherechedze maitiro ako, izvo zvinokubatsira iwe kukwirisa mukati mepuratifomu.
Nekutevera maakaundi mahombe, maitiro anozove ari patafura yako chinhu chekutanga muzuva, ona rwiyo rwavanoshandisa, mashandiro avanoita nevashandisi, uye pamwe kana iwe ukagadzira kudyidzana nechero yavo, unogona kuita kubatana mune ramangwana, izvi ingave iri wedzera yeakaundi yako.
Hunhu pamusoro pezvose.
Tiri kurarama munguva iyo tekinoroji uye aesthetics zvinotipa isu kunzwa kwekudya "mhando". Isu tave vanodzvinyirira mune izvi zvekuti hatichakwanise kutsigira kutarisa vhidhiyo uko mhando yemufananidzo iri pikisheni, kana ma audios akaiswa pamusoro, kana isingangonzwikwe. Iwe unogona kutsikisa chero chii chiri, iwe unoziva kuravira mavara, asi kana pasina mhando mavari, vashandisi vanongokupa iwe. Saka isu tinogara tichikurudzira HD uye akatwasuka mavhidhiyo, neaya mabhesi maviri iwe uri munzira yako.
Kana iwe uchizoshandisa mimhanzi, kuva munharaunda.
Zvimwe runyorwa rwe "Mazuva ese Mix" Spotify inogona kunge isiri iyo yakanakisa sarudzo kana chinangwa chako chiri kuenda kutapukirwa. Zvinokurudzirwa kushandisa mimhanzi iyo imwechete iyo App iri kukupa iwe, vimba nazvo nekuti ndizvo zviri kukumbirwa nevanhu uyezve kuda kuteerera. Zvichida zvakaitika kwauri, kuti une rwiyo mumusoro mako uchichihon'era zuva rese, kana ukaenda kuTikTok muchikamu che "For You" pachave nemavhidhiyo akati wandei nerwiyo irworwo uye uchakwanisa kuziva ndiani uye anokwanisa kubvisa kusahadzika uku. Zvinoshamisa, handiti?
Mahashtag haazombofa akabuda muchitaera
Sezvatagara tichishandisa hashtags Mune mamwe masocial network, TikTok ine ma hashtag mana akakosha:
Naizvozvi, pamwe neako akasarudzika ayo ane hukama nezviri mukati, unogona kubudirira, kuti kana, usingauye nehuwandu hwe hashtags kuti izvi zvinorangwawo neiyo algorithm. ZISO.
Iwo marongero, kubata nguva kana kwete.
Nyaya yemapurogiramu haisi imwe sainzi, asi chiri chokwadi ndechekuti iwe unofanirwa kushambadzira zvakanyanya sezvinobvira mukati menguva imwe chete, semuenzaniso: pakati pegumi nagumi na11.00 dzemasikati inguva yakanakisa, asi usashambadze mumaawa anobata nguva. Type: 17.00 pm, pedza maminetsi mashoma pamwe, pano kubata nguva kunokunyadzisa, sezvo, senge iwe, kune mamirioni ari kuita zvakafanana, uye kana ukashambadza panguva imwechete seumwe mushandisi ane huvepo hushoma, zvemukati zvinokanganikwa .
Pindirana, govana uye usatombokanganwa kuti uri munhu.
Chinhu icho vagadziri vezvakawanda vanokanganwa pane avo network vateveri vavo. Muchokwadi, ivo vanokanganwa kuti ndivo ivo vakavamisa, kwete marangi, vakauya gare gare. Naizvozvo, kunyangwe kana iwe uine yakawanda kwazvo nhamba yevateveri, pindirana navo uye unzwire tsitsi, izvo zvinokosheswa uye kuvimbika kumushandisi wako.
Pindura mibvunzo yavo nezve zvigadzirwa zvaunoshandisa, kwauri, uye kunyange dzosa kukwazisa uye iwe uchaona kuti nekufamba kwenguva avo vaive newe pakutanga, vacharamba vachive kana iwe uchitonga mamirioni evateveri veApp.
Inogona kunge isiri iyo mashiripiti fomati yekuenda hutachiona paTikTok, asi ipfungwa iyo kwaunogona kutanga kuongorora uye kushandisa kwako kugona kuti vamwe vashandisi vazive iwe. Iwe unogona kugadzira izvo zvemafashoni zvemukati izvo iwe zvawagara uchida nenzira yepakutanga, sekunge iwe kunge uchiudza shamwari dzako, ndiyo yakanakisa kiyi. Kana kunyangwe dzidziso yekugadzira, nekuti kwete, kunyangwe kana iwe usingakwanise kutsanangura zvizere maitiro acho mumasekondi gumi nemashanu, unogona kuratidza mhedzisiro yekupedzisira uye vanhu vanofarira vanogona kuona chimiro chako pawebhusaiti yako wega kana YouTube chiteshi.
Muchidimbu, izvo zviwanikwa zvatiinazvo uye zvingave zvakanaka kuti tizive mashandisiro azvo. Isu tinovimba iwe wakafarira ichi posvo senge isu zvatakaita uye kuti zvinokubatsira iwe.
Ona nyaya yakazara
Tsvaga zvakaitika kuna Dulceida naAlba Paul
Muchinyorwa chedu nhasi tinoda kukuudza nyaya yezve kudanana pakati Dulceida naAlba Paul. Chii chaitika? Sei imwe yeainyanya kutaurwa nezvehukama muma network yakasvika kumagumo? Zvese zviri kuseri kweiyi mbiri ye inopisa izvo zvakaita kuti kurambana kwavo kuve maitiro uye kutoburitsa zvakavanzika zvemuchato wavo.
5 tapas ine hutano yekutora neye aperitif
Kupera kwevhiki kwasvika! Uye isu tinoziva kuti marongero pamwe neshamwari dzako ndiwo achave iwo marongero ezuva, nekuda kwechikonzero ichocho, kana iwe uchinzwa kuti iwe unotofanira kugadzirisa zvakawandisa zhizha zvishoma, mukati Hanukeii Takuunzira chinyorwa chine matepi mashanu 'ane hutano' kuti uperekedze iyo Appetizer, kuitira kuti parege kuzozvidemba zuva rinotevera uye iwe uchiramba uchizvitarisira. Izvo zvinonaka!
4 mabhaisikopo uko magirazi ezuva ave ari iwo ma protagonists
Kune mafirimu, sei zviitiko, sevanhu, uyezve sei gafas de sol izvo zvinoramba zviri mundangariro medu. Pane ino nguva, isu tinoda kukuratidza zvinoitika zvema cinema, mukugadzira mafambiro uye ndangariro, iwo mavara uye iwo magirazi ayo akaratidzira pamberi nepashure munhoroondo yemagirazi ezuva. Zvichida zvinonzwika kujairika kwauri 'Thelma naLouise', Inonakidza? Ramba uchiverenga!